Kuzohlekwa waya-waya eThekwini ngempelasonto | News24
eThekwini - Umcimbi iKings & Queens of Comedy, ozobe useThekwini ngale mpelasonto kuzokuba ngomkhulukazi walolu hlobo kulo nyaka.
Lo mcimbi uzokuba ngoLwesihlanu mhlaka-9 Febhruwari eDurban ICC kanti uzobe ubophele osomahlaya abathandwa kakhulu kuleli, okubalwa kubo oCeleste Ntuli othathwa njengendlovukazi yamahlaya esiZulu, uSifiso Nene, uMarc Lottering kanye nabanye abazobe beshiyelana inkundla, kujatshuliswa abantu.
Lo mcimbi uneminyaka eyisithupha wasungulwa kanti kusobala ukuthi ukhula minyaka yonke njengoba abathandi bamahlaya bafika ngobuningi babo njalo uma ufika kwelikabhanana.
OLUNYE UDABA:USkolopad uthi akanaso isikhathi so-Ben 10
Abahleli balo mcimbi bathi kulokhu benze isiqiniseko sokuthi bagcwalisa inkundla ngosomahlaya abangaconsi phansi.
“Kulo nyaka sithe akesishintshe ukwenza, sigcwalise inkundla ngazo zonke izinkakha ezinomlando omuhle kwezikaqedisizungu. Simeme bonke osomahlaya esaziyo ukuthi bayathandwa futhi bahlonishwa kakhulu kulo mkhakha wabo.
"Inhloso yethu wukujabulisa abantu, sibanike ithuba lokuphumuza umqondo bangcebeleke kahle,” kusho u-Osman Osman ongumphathi wenkampani iBlu Blood, okuyiyona ehlela lo mcimbi.
Lo mcimbi uqala ngo-20:00 ebusuku kanti amathikithi abiza u-R200 eComputicket.